Boko Haram oo weeraro horleh ku qaaday dalalka Cameroon & Niger – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xoooggaga Boko Xaraam ee ka dagaallama dalka Nigeria, ayaa kordhiyay weerarrada ay ku qaadayaan dalalka deriska la ah ee Cameroon iyo Niger, xilli uu jiro dadaal lagu sameynayo ciidammo goboleed la dagaallama ururkaasi.
Dadka ku nool waqooyiga Cameroon ayaa kusoo warramaya in 20 qof oo bas la socotay la afduubtay, xilli ay kasoo laabanayeen suuqa. Dadkaasi ayaa la sheegay in laga qafaashay tuulada Koza, loona kaxaystay dhanka Nigeria. Wararka ayaa intaa ku daraya in weerar lagu qaaday degmo kale oo la yiraahdo Kolofata.
Waxaa dib loo dhigay doorasho ka dhici lahayd Nigeria sababo ammaanka awgood, balse dad badan ayaa u arka dib u dhigida doorashada mid siyaasad ka dambeyso, oo lagu caawinayo madaxweyne Goodluck Jonathan.